Diyaaradaha dagaalka Kenya oo duqeyn ka geystay deegaano kuyaala gobolka Gedo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDiyaaradaha dagaalka Kenya oo duqeyn ka geystay deegaano kuyaala gobolka Gedo
Diyaaradaha dagaalka Kenya. [Sawirka: Archive]
Garbahaaray-(Puntland Mirror) Diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa duqeyn ka geystay deegaano kuyaala gobolka Gedo xalay oo Sabti ahayd, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Duqaynta ayaa ka dhacday deegaanka Kulbis oo qiyaastii 20km dhanka waqooyiga uga beegan magaalada Garbahaaray ee gobolka Gedo, halkaas oo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku leeyihiin saldhigyo, sida ay wararku sheegayaan.
Ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay sameyn doonaan qiimeyn ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqayntaas.
October 2, 2017 Wasiir Juxa oo shir looga hadlayo arrimo ku saabsan Soomaaliya uga qeybgalay dalka Finland